Dhuxul function Multi, MFT toosh-FS-1001 - Shiinaha Ksdoing Co., Ltd
function Multi siyasad Orb
Multifunction siyasad Firimbi
Mini qoqobada Fish Xararad taageere batari dabayn
Mini taageere batari dabayn Xararad
Mini Tennis socoto fadeexadda Xararad taageere batari dabayn
Dhuxul function Multi, MFT toosh-FS-1001
Alaabta Tani waa toosh kaliya ee aad waligaa la kulmi doonaa. Waxay isku daraa dhammaan hawlaha tooshashka dhaqanka iyo wax gebi ahaanba NEW & GAAR AH !! Waa in aad u jeclahay! 300 Lumen Spotlight (-Nal sare-low) 6 Work LED Light, 6 LED UV / Black Light
WAA MAXAY WAX SOO SAARKA THE?
Alaabta Tani waa toosh kaliya ee aad waligaa la kulmi doonaa. Waxay isku daraa dhammaan hawlaha tooshashka dhaqanka iyo wax gebi ahaanba NEW & GAAR AH !! Waa in aad u jeclahay!
300 Lumen Spotlight (-Nal sare-low)
Red Lens Sifeey
isticmaali karo siyasad eekoow
Dabool Kokes oo la isticmaali karo ee laga shido oo usha. Leexo uu Kokes ku qiyaastii 3 seconds. Waxa keliya ee aad ku amray ul siyasad. Haddaba isticmaali ul siyasad aad iftiinka iyo batariyo badbaadin.
SIDEE TAXANAHA Toosh THE keligiisa?
Press iyo qaban ee "On" button ilaa nalalka bidhaamaya. Wax soo saarka ayaa hadda ka shaqeeya wareegyada keydinta tamarta. Hadda waxaad sii wadi kartaa Nuur ul uu yahey mid aan dheecaan ka baytariyada aad.
SIDEE LA karo siyasad ul SHAQEEYSAA?
Inside usha siyasad isticmaali karo waa kiristaalo Rafaa ee aluminate strontium. Tani waa ugu ifka badan, ugu dhaqsiyaha badan ku amraya, iyo ugu dheer dhuxul siyasad-in-the-madow ee suuqa. Ka fakar sida uu yahey ee xiddigaha gudcur aad dhejin saqafka laakiin on steroids.
Maxaa ka dhigay OUR siyasad-IN-KA-madow sidaas dhalaalaya?
Siyasad-in-the-madow Dhaqameed ku yimaado budada ah, ka fikir budada ah sida malaayiin buushka yar in uu u nuugo iftiin xukumaya. Marka si buuxda u eedeeyay walxaha kasta oo gaar ah shanqarta uu yahey heerka hoose ah ilaa iyo inta uu ku egyahay ee tamarta. Tani waa sababta uu yahey dhaqanka mugdi ah ma aha in dhalaalaya, sababtoo ah qayb ka yihiin si yar qaddarka iftiinka ay qaban karaan oo dhaadheer waa ay yar tahay. Halka kiristaalo siyasad alaabta this waa Rafaa, oo ay size walxaha weyn u ogolaanaya inay ka nuugo iftiin badan oo dhaadheer iftiin badan ka dheer. In aan ku xuso tan iyo kiristaalo yihiin si weyn indhaha aad xaggooda doonaa sida ifaya. Waxay u eg yihiin buushka iftiin weyn!
Bal maxaa iftiin UV?
Shiddo toosh si joogto ah ay gudcurka ku baabbi'in kartaa aragtida habeenkii ama barbaro meesha aad dareen aan loo baahnayn, sidaa darteed waxaan siiyey toosh this hawl qarsoodi by ay ka mid yihiin nalalka madow. Isticmaal nalalka madow ah si loo badbaadiyo aad aragtida habeenkii ama si fudud ma doonayo in aan spook kalluunka safar kalluumaysi aad. Waxaad kaloo isticmaali kartaa alaabta si aad u hesho hangarallayaal, Wasaqda xayawaanka, Calaamadayn ammaanka, iyo in ka badan. Kuma aannu isticmaalin nuurka cas, sababtoo ah ma ka qaadaan doonaa kiristaalo our.
WAA MAXAY SABABTA LABAAD FURSADAHA batari ku xirato?
Toosh Tani waa dhan oo ku saabsan dabacsanaan iyo isku halaynta si aan u bixiya dadka isticmaala labo baakad batari kala duwan: 3 baytariyada AAA (optional) iyo 1 USB lithium dabayn batari ra'iyi.
Fullaaci kara filter Lens RED?
Isticmaal filter cas gashto kaas oo ku haboon ku yaal xagga hoose ee aad toosh.
Previous: Multifunction siyasad Firimbi
Next: clip-on hagaajin Mini USB- FS-2003Ub
Isbedel Light & aqbasho Shuclada
Dual Chargebale Toosh
Degdegga ah Toosh
Emergency Tool Toosh
Shuclada Degdegga ah
Emergency Shuclada Light
Flash hoggaamiyo Shuclada
Tooshashka iyo siraaddo
Xamili gacanta hoggaamiyo Toosh
Handhheld hoggaamiyo Toosh
High dhalaalka Toosh
Power Sare hoggaamiyo Shuclada
hogaaminayaan Quusitaanka Shuclada
hoggaamiyo Toosh Shuclada
Tooshashka ay hogaaminayaan
hoggaamiyo dabayn Toosh
hogaaminayaan Toosh Light Strong
Hoggaamiyo Shuclada Toosh
hoggaamiyo Shuclada Light Toosh
hoggaamiyo Shuclada dabayn karo
Inta badan xoogbadane hoggaamiyo Toosh Shuclada
Function Multi Car Shuclada
Function Multi Flash hoggaamiyo Shuclada
Tooshashka Function Multi
Function ay hogaaminayaan Toosh Multi
Function Multi hoggaamiyo Shuclada
Multi Functional hoggaamiyo Toosh Shuclada
Multi Purpose Shuclada Light
Multi Tool Toosh
Multi Tool hoggaamiyo Shuclada Light
Tools Multi Shuclada
Multifunction Camping siraad Toosh
Function Multi dibada Shuclada
Bannaanka MFT Shuclada
qaadi karo Dynamo dabayn Shuclada
Portable Toosh Function Multi
Toosh USB la qaadan karo
Rechargable Shuclada Light
dabayn hoggaamiyo Shuclada
dabayn Multi ujeeddo Shuclada Light
Dabayn Shuclada Light hoggaamiyo Toosh
dabayn Shuclada Light Price
Toosh Light Strong
Tools Flash hoggaamiyo Shuclada
Shuclada Light hoggaamiyo Toosh
USB dabayn Shuclada Light
biyaha hoggaamiyo Shuclada dabayn karo
Cinwaanka: 5 / F, Waxaad Shang Mei Building, YanTian, ​​FengGang, DongGuan, gobolka Guangdong, Shiinaha